Odeeffannoo fi Tajaajila Balaa’amaa Gatamaa | Hazardous Waste Management in King County, WA
COVID-19 tti hojii deebii kennuu —Walitti qabama balfa summaawaa dabalatee tajaajiloonni ummataa hedduun COVID-19 dhan miidhamanii jiru. Iddowan walitti qabaa tokko tokko kan cufaman yoo ta'u tajaajiloonni tokko tokko yeroodhaf dhaabbattanii jirru. Odeeffannoo haaraaf bilbila 206-296-4692 irratti bilbilaa. Turjumaanni gaaffidhaan ni argama.
Odeeffannoo fi Tajaajila Balaa’amaa Gatamaa
Yoo Kiing Kaawuntii jiraattan yookan hojjettan ta’e, isinii fi naannoo keemikaalota summaawaa irraa eeguuf, akkamii fi eesssatti balfaa fi meeshaalee summaawaa ta’an gatuu akka dandeessan, tajaajila mijataa ni kennina.
Oomishalee Summaawoo Beekamoo
Oomishalee summaawaa kan itti hin fayyadamin hafan, dullooman, ykn kan hin barbaadamne olkaa’uun baayyee hamaadha. Yoo iddoo gataa balfaatti gataman ykn bo’ootti naqaman, namootaa fi naannoo miidhuu danda'u. Asxaa oomishaa dubbisuudhaan oomishalee summaawaa adda baafachuu dandeessu. Oomishaleen summaawoo asxaa kan jechoota danger (Balaa qaba), poison (summii), warning (akeekkachiisa), ykn caution (of-eeggannoo) of keessaa qabu qabaan.
Oomisha fuuldura yookaan duuba irratti asxaawwan kanneen qaban ilaalaa.
Maaloo yaadadhaa: Oomishoota EPA Safer Choice ramaddii isaanii kessa kan baayyee nagaa qabanii dha, yoo CAUTION (OF-EEGGANNOO) jedhamee itti mallatteffamee illee.
Oomisha jechoota CAUTION (OF-EEGGANNOO), WARNING (AKEEKKACHIISA), DANGER (BALAA QABA) yookaan POISON (SUMMII) jedhu hin qabne filadhaa.
Hanga tokko miidhaa qaba
Oomisha jechoota CAUTION (OF-EEGGANNOO) yookaan WARNING (AKEEKKACHIISA) jedhu qaban filadhaa.
Baay’ee miidhaa qaba - dhiisaa
Oomishawwan jechoota DANGER (BALAA QABA) yookaan POISON (SUMMII) jedhu qaban dhiisaa. Isinii fi maatii keessaniif kan baay’ee miidhaa qabaan dha.
Tartiiba 3 karaa miidhaa malee balfa gatuuf
Meeshaalee walitti qabaa:
Yoo asxaan danger (balaa), poison (summii), warning (akeekkachiisa), yookin caution (of-eeggannoo) dabalate inni balfa balaafamaa dha.
Tarree wantoota nuti fudhannuu kana ilaalaa.
Meeshaalee qaboowwan isaanii duraa keessa ka’aa, oomisha asxaa hin qabne irratti barreessaa, akkasumas akka hin yaane ykn hin dhangalaane mirkaneessaa. Meeshaalee kanneen, konkolaataa keessan keessa, kutaa namaa irraa fageessaa kaa’aa.
Meeshaalee keessan gara giddu-gala gata balfa summaawoon itti awwalamutti fidaa. Gatiin isaa kaffaltii tajaajiloota bu’uura jireenyaa irratti waan dabalamuuf kaffaltii hin qabu.
Giddu-gala balfaa itti gatan isinitti dhihoo ta’e argadhaa
Dilbata – Kibxata
Adoolessa 4, Guyyaa ayyaana Galata Galchaa, Guyyaa Ayyaana Qillee, fi Guyyaa Bara Haaraa irratti ni cufamaa.
Kamisa - Sanbata xiqqaa
Buufata dabarsaatti aaneetu argama.
Adoolessa 4, Guyyaa ayyaana Galata Galchaa, Guyyaa Ayyaana Qillee, fi Guyyaa Bara Haaraa irratti ni cufama.
Kibxata - Jimaata, Sanbata xiqqaa fi Dilbata
8 a.m. – 4 p.m. (Kib - Jim), 9 a.m. – 5 p.m. (San. xiqqaaDilb)
Faasiiliitin Factoria buufata dabarsaatti aaneetu argama. Guyyaa ayyaana Galata Galchaa, Guyyaa Ayyaana Qillee, fi Guyyaa Bara Haaraa irratti ni cufama.
Sanbata xiqqaa - Dilbata
Sa’aatii 10:00 hangaa sa’aatii boodaa 5:00
Iddoon Auburn Wastemobile waggaa-guutuu dhuma torbanii irratti banaadha. Bakka kanatti Boba’oowwan galaana irraa fudhatama hin qabani.
Bakki kun Sadaasa 26-27, Muddee 24-25, Muddee 31-Amajjii 1 kan cufamu ta'a.
Wastemobile - Tajaajilla Balaa'amaa Gatamaa Imalu
Tajaajilli bilisaa walitti qaba balfaa kun, Kiing Kaawuntii keessa hawaasota filataman irra deemuun, jiraattotaa fi daldala xixiqqoof, balfa summaawoo isaaniif iddoo mijataa ni kennu.
Wastemobile sosocho’aan Bitootessa irra hanga Onkololessati kan hojjetu ta'e wagga kanaf hojji goolabeera. Tarree guyyaa sagantaa haaraadhaaf Guraandhala keessa deebi'aa ilaalaa.
Sagantaa Funaannii Manaa
Umuriin keessan waggaa 65 fi isaa olii, ykn nama qaama miidhamoodhaa? Yoo konkolaataa hin qabaannee fi bakka iddo walitti qaba balaa’amaa gatamaa hin arganne ta'e, kosii mana keessan akka isiniif kaasnu beellama qabsiisuuf nuu bilbiluu dandeessu. Sagantaan manarra deemuun funaanuu karaa kaffaltii tajaajila bu’uura jireenyaa ta’aniin waan kaffalameef: funaanu yoo dhufne, isin hin kaffalchiifnu.
Akka isinii kaasnu beellama qabsiisuuf, kanaan bilbilaa
Wiixata – Jimaata, sa'a 9 a.m. – 4:30 p.m. (ayyaanoota osoo hin dabalin) turjumaanii gaffidhan ni arggama
Daldala Kiing Kaawuntii keessaa Qabduu?
Akkaa abbaa daldalaatti, meeshaalee summaawoo ta’an hojjettoota kee, uummata, ykn naannoo uumamaa irraan miidhaa akka hin geenye, to'achuu fi hoogganun dirqama keessani. Kaffaltii malee, daldaloota ulaagaa guutaniif balfa summaawaa isaanii karaa balaa hin qabneen gatuuf, gargaaruu ni dandeenya. Dabalataanis, bakkeetti dhufuun tajaajila gorsaa ni kennina, malawwan isinii ta’u isinii himna, akkasumas, foyya’insaaf tumsa qarshii ni goona. Tajaajiloonni kunneen hundi, dursanii karaa biilii tajaajila bu’ura jireenyaa ta’an (Bishaan, ibsaa, fi k.k.f) waliin kaffalamaniiru; kaffaltii dabalataa malee dhihaatan.
Barumsa dabalataa argachuufi daldalli keessan ulaagaa guutuu isaa baruuf bilbilaa
Maal fiduufi [What to Bring - SQG, Oromo]
Qulqulleessaa gaarii keessaniif toftaalee 6 [Safer Cleaning Recipes, Oromo]
Oomisha Manaa Kan Maatii Kootiif Nagaa Ta’e Akkamittan Bitaa? [Safe Shopper's Card, Oromo]
Maal fiduufi [What to Bring, Oromo]
Sarara Gargaarsaa Haz Waste
Jiraattonnii fi daldaloonni xixiqqoon, odeeffannoo haala ittiin balfa summaawaa ta’an karaa sirriitiin gatuun danda’amu, akkamiin itti fayyadamummaa oomisha summaawoo ta’an xiqeessuun danda’amu, akkasumas, mata-dureewwan biroo kanaan wal qabatan argachuuf nuu bilbiluu danda’u.
Wiixata – Jimaata
sa'a 9 a.m. hanga 4:30 p.m. (ayyaanoota osoo hin dabalin)
* Turjumaanni gaaffiidhaan ni argama
Jiraattonnii fi ogeessonni lafa sirreessuu hootlaayinii Garden irratti bilbiluun, gaaffiiwwan waa’ee biqiltuu manduubee irratti gargaarsa ogeessotaa tolaan argachuu danda’u.
Wiixata – Sanbata xiqqaa, sa'a 9 a.m. hanga 5 p.m. (ayyaanota osoo hin dabalin)
Sagantaan To’annoo Balaa’amaa Gatamaa miidhaa oomishoota summaawoo ta’an oomishuun, itti fayyadamuun, olkaa’uun, akkasumas, balfa summaawoo gatuun dhufu hir’isuun, fayyaa uummataa fi qulqullina naannoo uumamaa, Kiing Kaawuntii keessa jiranii eega. Nuti, waliigaltee naannoo kan Kiing Kaawuntii Magaalaa Siyaatil, magaalota 37 biroo dabalatee, gosoota lama, akkasumas, iddoowwan kanaa ala jiran dabalata.
Toora irra turaa
Yeroo Wastemobile ollaa keessan dhufu oduu fi odeeffannoo keenya haaraa argachuuf galmaa'aa. Xalayaan-oduu Ingiliffaan akka ta'u hubadhaa.